NJEHIE NA-EGBOCHI MWEPỤTA NKE NGWA SITE NA WINDOWS DEFENDER - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Njehie na-egbochi mwepụta nke ngwa site na Windows Defender
Na Windows 10, nsogbu na ịwụnye ngwa. onye na-egbochi nchebe anaghị enyere aka. Mgbe ị malitere installer, ihe ịrịba ama "nzukọ gị egbochiri ngwa a site na iji ọrụ nchịkwa ngwa na onye nchekwa Windows" gbapụta elu. Gụọ ndụmọdụ ahụ, a na-atụ aro ka ị gbanyụọ bọtịnụ Nche na BIOS. ma nke a abụghị nke dị, ya bụ, na bọtịnụ kaabụ e nwere ndepụta nke ngwaọrụ ndị na-ebute paswọọdụ na nchekwa taabụ, dozie ihe kachasị F12 ...., gbanwee ya na ya. Bootu nche adịghị apụta. melite BIOS anaghị arụ ọrụ, dịka ederede n'elu "" nzukọ gị egbochiri ngwa a site na iji njikwa ngwa ngwa na onye nchekwa Windows "acer aspire 5253g laptọọpụ